A impompo ubushushu kubekwe kufutshane kangangoko kule nkqubo ukuhluza swimming pool. Yenzelwe ukuba isetyenziswe ngaphandle iingcango ayidingi isigqubuthelo nxamnye iziqalelo. Enyanisweni ukuba Tshisa Pump uyafundiswa ngexesha operation akayi baqhube kakuhle.
Akukho ingqalelo efunekayo yi Tshisa Pump ngokungathi conditioner umoya. Ngokulula ukususa naziphi amagqabi, ingca, iphepha, njl leyo maxa wambi uqokelela evela emoyeni. Le chemistry pool kufuneka sihlale elungeleleneyo. Le grills evaporator ukuba wawutyabeka ukuthintela umhlwa. Kodwa ukuba uhlala kufuphi indawo ityuwa-amanzi ungafuna oya kumanzisa phantsi evaporator coil ngaphandle ukunceda ukuthintela kubanceda ityuwa kunye nerusi.
Ewe. Nangona kunjalo konke kuxhomekeke kubukhulu echibini kunye nexesha lonyaka. wenza iimpompo Ubushushu ukuba ukugcina ubushushu echibini yonke imihla. Ukuba impompo ubushushu silinganiswa ngokufanelekileyo kubungakanani pool, xa ubushushu olifunayo sifikelelwe iya ukugcina ngokuzenzekelayo ukuba iqondo lobushushu yonke nyanga elide.
Umbane ithengiswe yi iyunithi ekuthiwa kilowatt iiyure-. Omnye-ngeyure nganye yekilowatt ilingana 3412 BTU. BTU limele Unit British Thermal. Kuyinto iyunithi yokulinganisa abanye abenzi pump ubushushu sebenzisa ngeenkcukacha zabo.
COP omela Coefficient komsebenzi ie. Umlinganiselo imveliso amandla igalelo amandla. Oku kuxhomekeke ubushushu emoyeni okukufutshane kwaye iqondo lobushushu amanzi echibini lokuqubha. Ikuxelela ukuba amandla songa zokukala pump ubushushu.
Njengazo zonke iinkqubo zokufudumeza yokudada kucetyiswa ukuba usebenzise inshorensi echibini xa sukuba ichibi lokudada ayikho ukusetyenziswa. Oku kuzakugcina abe ngumphunga (ilahleko bubushushu omkhulu) kubuncinane ngoko ukunciphisa iindleko pool zokufudumeza jikelele nabangazithandiyo okungafunekiyo. A cover pool nga usike iyonke ilahleko ubushushu nge-50% kwi-95%.
iimpompo ubushushu Aquark kaThixo lisebenzise namacandelo ekumgangatho ophezulu, nokuba ngaphandle yokukhotha wesondlo, nempompo ubushushu pool ngokulula ithatha iminyaka eli-10 ukuya kuma-20. Kodwa, ngokulungiswa kakuhle, impompo yethu ubushushu qela ngokoqobo nobuhlala ixesha elide.
Neentsika eziphambili zale omtsha EU F-Gas Imithetho ukunciphisa kwekhabhoni ukuba aye izisombululo asezantsi GWP. Oku kubandakanya sisigaba ezantsi ukuselwa HFCs kunye nokuncitshiswa 37% ngo-2020 ne-79% ngo-2030 Xa iinkqubo 2025 Single Split A / C kunye ngaphantsi kwentlawulo refrigerant 3kg kufuneka libe refrigerant nge GWP.
R32 uye xi yokusebenza efanayo R410A malunga 12-26 Bar (174-377 PSI), ke R32 uye amandla engcono ukutshintshiselana ubushushu-umthwalo kwe R410A ukhulula namandla ngaphezu R410A ekwenzeni iinkqubo kakuhle ngakumbi.
R32 has a GWP ngaphantsi kwe R410 kwaye isebenzisa nesigxina refrigerant-30% ngaphantsi ukuvelisa umthamo umthwalo ngokulinganayo. Ngenxa yoko CO2 ukukhutshwa lilonke kungancitshiswa kangange-77%.
Ngokubanzi lilikhulu GWP kokukhona umgangatho LINGATSHA, R32 akukho ezahlukeneyo. R32 sele unikwe A2L Classification kwaye zihlelwe kudidi ezinokutsha A2. Classification ukuba umyalelo 67/548 / eEC & 1999/45 / EC: F +; R12 kakhulu ezinokutsha. Ngako oko kwenzeka kuphela kwaye abantu bayalelwa kakuhle kufuneka ukhombise iigesi phantsi koxinzelelo.
Idilesi: Keyuan Two Road, Gaoli Development Zone, Ronggui, Shunde District, Foshan, PRChina 528306